भेरीका बालविकास सहजकर्ताको तलब अव देखि १५००० ! •
भेरीका बालविकास सहजकर्ताको तलब अव देखि १५००० !
पुर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात बाल कक्षा संचालनका लागि नियुक्त गरिएका बालविकास सहजकर्ता (शिक्षक) हरुको हालको तलबभत्ता ६ हजार रुपैया मात्र छ । कक्षा १ मा भर्ना हुनु पुर्व बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास गराई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा र समुदायमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता मार्फत बाल कक्षा संचालन गरिरहेको छ ।
ति सहजकर्ताले कतिपय विद्यालयमा अन्य कक्षाको पठनपाठनमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षाको आधार खडा गराउने जिम्मा लिएका ति शिक्षकको पारिश्रमिकमा अन्याय हुँदै आएको आवाज उठ्दै आएको थियो । यही कुरालाई मध्यनगर गदै सरकारले आगामी आवको बजेटमा बालविकास कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताको मासिक तलब ६ हजारबाट १५ हजार बनाउने घोषणा गरेको छ । तर संघिय सरकारले दुई हजार मात्र तलब बढाएर अन्य सात हजार स्थानिय तहले ब्यहोर्ने जनाएको छ । तर कतिपय स्थानिय सरकारले बजेटले त्यति धेरै तलब धान्न नसकिने भन्दै तलब बढाउन नमानिरहेको अवस्थामा भेरी नगरपालिकाले भने सरकारले तोके अनुसार नै पुरै ब्ययभार लिन अग्रसर देखिएको छ ।
भेरी नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत बालविकासमा कार्यरत शिक्षक, लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीहरुको तलबका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले बताए । तीन सय बाट पढाउन सुरु गरेका शिक्षकहरुको तलबमान मासिक १५ हजार पाउने गरि नगरसभाबाट ब्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीले बताए । त्यस्तै न्युन तलब भत्ता पाउँदै आएका विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीका लागि पनि प्रति महिना सात हजार रुपैया बृद्धि गर्ने गरि नगरपरिषदले एक करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । आगामी साउन देखि नै उनीहरुले बृद्धि भए अनुसार तलब पाउनेछन् ।
भेरी नगरपालिकामा ४४ जना बाल विकास सहजकर्ता, १० जना लेखा सहायक र ५५ जना विद्यालय सहयोगी रहेका छन् । उनीहरुको लागि नगरपालिकाले थप्नु पर्ने सात हजार रुपैयाले पनि मासिक सात लाख ६३ हजार रुपैया दायित्व लिनु पर्ने देखिन्छ । भने बार्षिक रुपमा ९९ लाख १९ हजार रुपैया संघिय बजेटमा थप गर्नुपर्ने भएको छ । सवै दायित्व लिने गरि एक करोड बजेटको ब्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीको भनाई छ । मासिक पारिश्रमिक बढ्ने भएपछि लेखा सहायक, विद्यालय सहयोगी र सहजकर्ताहरु खुसी भएका छन् । रामजानकी आधारभुत विद्यालयमा बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता विमला शर्माले पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेकोमा संघिय सरकार र स्थानिय सरकालाई धन्यवाद दिएकी छन् । बषौं देखि हामीले उठाउँदै आएको आवाज केही हद सम्म भएपनि सम्बोधन भएको छ । अहिले पनि सरकार हामीलाई शिक्षक मान्न तयार छैन । विभेद जारी छ उनले भनिन ।
जिल्लाका अन्य पालिकाले भने बजेटमा बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सम्बन्धी केही खुलाएका छैनन् । जुनीचाँदेले संघिय सरकारले बढाए सरह बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखा सहायकलाई दुई हजार मात्र बृद्धि छ । बषौं देखि न्युन पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउन बाध्य बालविकासमा कार्यरत शिक्षकको तलब बृद्धि भएपछि उनीहरुमा थप हौसला बढ्ने भेरी नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अमृत बहादुर पुनले बताए ।